Ikhaya lami enkabeni yedolobha 1 - I-Airbnb
Ikhaya lami enkabeni yedolobha 1
Ifulethi elisanda kulungiswa kabusha eliphakathi, elifakwe ifenisha entsha, eliphelele ngazo zonke izesekeli, elikhanyayo, endaweni ethule izinyathelo ezimbalwa ukusuka e-Piazza del Campo nakwezinye izindawo ezikhanga izivakashi ezinkulu zaseSiena. Ifinyeleleka kalula ngezinyawo ukusuka ezindaweni zokupaka izimoto ezinkulu futhi ikakhulukazi izinyathelo ezimbalwa ukusuka ezitebhisini ezizihambelayo ezixhuma indawo yokupaka izimoto yase-San Francesco esikhungweni somlando.
Ifulethi linekamelo lokulala eliphindwe kabili, ngesicelo ungangezela umbhede wengane encane; igumbi lokuphumula elinombhede kasofa wabantu ababili kanye netafula ekhishini ekhoneni nendawo yokugezela.
Izindawo ezibaluleke kakhulu ongazibona edolobheni lami ukujikijelwa kwetshe ukusuka endlini: I-Piazza del Campo ne-Palazzo Comunale nemisebenzi yayo yobuciko, i-Duomo enemnyuziyamu enamathiselwe ye-OPA kanye ne-"Facciatone" enombono wayo we-panoramic ubheke indawo idolobha lonke. Kule ndawo i-Piazza del Duomo iphinde ibe yisikhungo somnyuziyamu wesibhedlela sasendulo saseSanta Maria della Scala eVia Francigena. Ungakhohlwa i-Pinacoteca Nazionale eneqoqo elibaluleke kakhulu lemidwebo ye-1200. Ukuqhubeka nokuhamba emigwaqweni yesikhungo bese indlu kaSt. Catherine ongumvikeli wase-Italy naseYurophu kanye nezinye izimangaliso eziningi ezizotholakala, mhlawumbe ezingadumile kangako, kodwa njengoba kuyathakazelisa
Isifundazwe saseSiena sihle kakhulu futhi ukusuka edolobheni ungenza izinkambo ezihlukahlukene ezithakazelisayo. I-Chianti eneGaiole nezinqaba ezifana nalezo zaseBrolio neMeleto, iVal d'Elsa eneMonteriggioni neSan Gimignano, iVal d 'Orcia neMontalcino, iBagno Vignoni nePienza kanye neCrete Senesi, zonke ziyizindawo ezimangalisayo, ngalinye linendawo yalo. imininingwane yakho. Iwayini, amafutha, i-truffle emhlophe, ikristalu, okugeza bese kuba amasonto, izikhumbuzo, ama-panorama. Ikakhulukazi imibono. Izindawo ezilungele uhambo ngemoto, kodwa futhi zifinyeleleka kalula ngebhasi noma izinkambo ezihleliwe.